मुस्किलले २८ प्रतिशत खर्च- समाचार - कान्तिपुर समाचार
(रुकुम पश्चिम) — चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा संघीय सरकारको पुँजीगततर्फ २८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ  । संघीय सरकार मातहत रहेका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाले जेठ मसान्तसम्म २८ दशमलब ७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छन्  ।
संघीय सरकारले चालु वर्षका लागि जिल्लाका विभिन्न निकायमार्फत ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिएको थियो । उक्त बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १७ करोड ७६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लाका सरकारी निकायले असार महिनाभर ७१ दशमलब २८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसअघि बजेट खर्च गरेको सिलसिलामै काम भए चालु आर्थिक वर्षमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कार्यालय योजना तथा आयोजनाको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय चौरजहारीको १८ करोड ८ लाखमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७ करोड ४१ लाख ६ हजार मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजेट पाएका तीन वटा स्थानीय तह र एउटा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले पनि खासै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छ । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट आठबीसकोट, मुसीकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पहाडी साना किसान अनुकुलन आयोजनाको पनि ७ करोड बजेट खर्च हुन बाँकी छ । ९ करोड ३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये उक्त परियोजनाले जेठ मसान्तसम्म २ करोड ५२ लाख २१ हजार मात्रै बजेट खर्चिन सकेको छ । संघीय सरकारबाट आएको चालुतर्फको बजेट भने ९० प्रतिशत जति खर्च भएको छ । चालु वर्षका लागि प्राप्त २ अर्व ६६ करोड ८५ लाखमध्य जेठ मसान्तसम्म २ अर्व ३८ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८९.३६ प्रतिशत हो ।
कर्मचारी अभाव, समन्वय, सहकार्य हुन नसक्नुका कारण पुजिगततर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । समयमै काम गर्ने चलन कम भएकाले बजेट खर्च पनि ढिला हुने गरेको पाइएको पहाडी साना किसान अनुकुलन आयोजनाका प्रमुख पर्शुराम पौडेलले बताए । समयमै सम्झौता गरी काम सकिए पनि भुक्तानी लिन भने अन्तिममा आउने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । फिल्डमा काम भइरहेकाले असार महिनामा धेरै भुक्तानी हुने र खर्च प्रतिशत बढ्ने पौडेलले जनाए ।
यसको साथै काम भइसकेको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि पुँजीगततर्फको बजेट खर्च नभएको देखिएको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । निर्माणका काम भइरहेको र प्राविधिक मूल्यांकन लगायतका काम सकेर एकैपटक धेरै बिल उठ्ने भएकाले यस्तो देखिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बढी नै बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको ढकालको भनाइ छ । विगतजस्तै सबै काम असारमा गर्ने परिपाटी नहट्नुको कारण ११ महिनासम्म जम्मा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:०१
असार ४, २०७६ दामोदर न्यौपाने
गुठियारको हक समाप्त हुँदा र निजी गुठी राज्यले लियो भने के असर पर्छ भन्ने जवाफ खोज्न पशुपति जानुपर्छ । पशुपतिका भण्डारी केदार भण्डारीका अनुसार गुठियारको हक समाप्त हुँदा पर्वपूजा मासिँदै गएका छन् । भएको ठाउँमा पनि जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भएका छैन ।
भण्डारीका अनुसार पशुपतिमा बजाई बाजाको राग नै मासिएको छ । परापूर्वकालदेखि यहाँका खड्गीले बजाउँदै आएका थिए पञ्चेबाजा । यो बाजा कोषले खड्गीबाट खोसेर बाहिरका दर्जीलाई दिएको थियो । यी विस्तारै लोप हुँदै गएका छन् । रागरागिनी बाजा बजाउनुपर्ने हुन्छ । पञ्चैबाजामा बजाउने पनि दमाई ल्याएर बजाउनुपरेको भण्डारी बताउँछन् । धिमे बाजा, खिं बाजा, विभिन्न समयमा बजाउने बाजा हराएको छ ।
‘तर अहिले सबैमा एउटै राग बजाउँछन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘न राग मिल्छ, न समय । परम्परा जसले चलाए, उनैले मात्र मर्म बुझ्न सक्छन्, बाहिरकाले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण हो यो ।’ दक्षिण ढोकामा ८४ व्यञ्जनसहितको महाभोग लगाउनुपर्छ । भोग लगाउँदा पनि विशिष्ट बाजा बजाइन्थ्यो । त्यो बाजा पनि हराएको छ । भगवान्लाई उठाउँदा, खाना खुवाउँदा र सुताउँदा राग बजाउने गरिन्छ ।
यहाँको उन्मुक्त भैरवको माथि कुमारी पूजा भएको हुन्छ । हुनमान ढोकाको तलेजु भवानीको पुजारी आउँछन् यहाँ । ‘त्रिखण्ड रूपमा पूजा हुन्थ्यो । तर त्यहाँ पूजा भएको छैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘पूजा व्यवस्थित भएको छैन । विधि विधानअनुसार भएको छैन । पूजामा टुट आएको छ ।’ शिवपार्वत्री नाच नभएको पाँच वर्ष भयो । चारुमती विहारका शाक्य परिवारले चलाउँथे यो नाच । खर्च अभावमा यो नाच अहिले लोप भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग ५ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए । कोषले त्यो उपलब्ध गराएन । पशुपति क्षेत्रका प्रत्येक चोक, प्रत्येक डबलीमा तीन दिनसम्म नाचिन्थ्यो यो नाच ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठी विधेयकको विरोधमा पशुपति क्षेत्र गुठियार, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, संस्कृतिविद् सडकमा आए । सडकमा मुख्य आकर्षण सांस्कृति बाजा थियो । नेवार समुदायका टोल टोलबाट ल्याइएको थियो बाजा । वर्षा ऋतुमा बजाइने सिंजिया राग बजाएको थियो बाजा टोलीले । यो राग निकाल्न धिमे बाजा, मुस्या बाजा, बाँसुरी, खिंलगायत बाजा चाहिन्छ । यीमध्ये बाँसुरी बजाउने छैनन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजना लागू गर्ने क्रममा २०५९ सालमा यहाँको बस्ती अधिकरण गर्‍यो । अधिकरण गरेपछि यहाँका १ सय १९ परिवार अन्यत्र गए । तीमध्ये बाँसुरी बजाउने समूह पनि गयो ।
‘घर भत्किएपछि गुरु अन्त गए । गुरु अन्त गएपछि खट बोक्ने पनि गए । धर्मसंस्कृति चलाएर बसेका प्राचीन बासिन्दा यहाँबाट बिदा भए । गुरु नभएपछि अधिकांश परम्परा लोप हुँदै छन्,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘स्थापित हुनुपर्ने सबै विस्थापित भए । पशुपति जस्तो थियो, त्यस्तै रहनुपर्थ्यो । जस्तो छ त्यस्तै रहनु सम्पदा जोगिनु हो । नियोजित रूपमा पशुपतिनाथको सनातन धर्म मास्ने योजना बनाइएको छ । त्यहीअनुसार मास्टर प्लान बनाइएको छ । मास्टर प्लान पनि खै त लागू भएको ? काम खै भएको ?’
बाजा चलाउन बेग्लाबेग्लै निजी गुठी थिए । बस्ती उठाएसँगै ती गुठी पनि लोप भएको डंगोल बताउँछन् । धिमे गुठीले बाजा सिकाउने काम गर्थ्यो । निजी रूपमा राखिएको गुठी थियो यो । गुठीका जग्गा कोषले नै अधिकरण गरेर लियो । बाजा गुठीको गुठियार पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नौ जातिमध्ये डंगोल थिए । यसले बाजाको बनाउने र बजाउन प्रशिक्षण दिने काम गर्थ्यो । ऋतुअनुसार बेग्लाबेग्लै बाजा बजाइन्छ । सबै बाजा बजाउन राग जानेको मान्छे हुनु । पाशुपत क्षेत्रमा ऋतुअनुसार धुन बजाइन्छ ।
असार साउनमा बजाइने सिंजिया धुनपछि साउन भदौमा ब्याचुली धुन बजाइन्छ । यो नेवारी पात्रोअनुसार गुँला महिनामा पर्छ । गुलाँ महिनापछि यला महिना आउँछ । यो महिनामा बजाइने धुन न्याँ र गौ धुन हो । यलँपछि नवरात्रि सुरु हुन्छ । यो महिनामा मालश्री बजाइन्छ । मालश्रीमा बाँसुरी र धिमे मुख्य बाजा हुन् । यो बेला पनि बाँसुरी बजाउने हुँदैनन् ।
भण्डारीको भुनु गुठीको सय रोपनी जग्गा थियो । यो निजी गुठी कोषले लिइदियो । भण्डारीको वर्षमा १० दिनसम्म विशेष पर्व मनाउनुपर्छ । यो बेला पशुपतिका सबै शक्तिपीठ जानुपर्छ । यसका लागि कोषले एक लाख रुपैयाँ दिन्छ । ‘यतिले कहाँ पुग्छ ?,’ भण्डारी भन्छन्, ‘दिनहुँ भोज खुवाउनुपर्छ । कहाँ पुग्छ यतिले ? कि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्‍यो, कि पर्वमा जति लाग्छ, त्यति दिनुपर्‍यो ।’ पशुपतिका नौ वटै जातिको सिं (मलामी) गुठी थिए । सबै जातिको बेग्लाबेग्लै गरेर २० वटा यस्ता गुठी थिए । ती सबै गुठीको जग्गा कोषले लिएको छ । जग्गा गएसँगै यी गुठी नाश भएको भण्डारीले बताए ।
फेटा गुठीको जमिन पनि कोषले लिएपछि देशोद्वार पूजामा समस्या भएको छ । यो गुठी यहाँका वैद्य समाजले सञ्चालन गर्थ्यो । पशुपतिका मुख्य जात्रामध्ये पर्ने देशोद्वार पूजामा फेटा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्थ्यो गुठीले । यहाँका सबै जात चिनिने गरी फेटा लगाउने चलन छ । वैद्यको मात्र यो पर्वको लागि १३ रोपनी जमिन थियो । ‘कोषले यो पनि खोसिदियो,’ कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भन्छन्, ‘जमिनबाट बाली आउँथ्यो । त्यसले पूजा चलाउन सजिलो थियो । कोषले लिएपछि यसमा पनि समस्या भएको छ ।’
‘मान्छेले हो संस्कृति निर्माण गर्ने । मान्छेले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मान्छे नै हटाइदिएपछि के हुन्छ ? संस्कृति मासिन्छ । त्यस्तै भएको छ श्री पशुपतिनाथमा ।’ पशुपति क्षेत्र ९ ढोका, ९ डबली, ९ इनार, ९ धारा, ९ शक्तिपीठ, ९ चोक, ९ चउर र ९ जात, ९ टोल मिलेर बनेको छ पाशुपात क्षेत्र । यसलाई ९ गुणा ९ (८१) ग्रहको संयोजन भनिन्छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काम यही ९ जातले गर्दै आएका छन् । नेवारी भाषामा देवपाटलाई ‘ग्वल’ भनिन्छ । राजभण्डारीका अनुसार ग्वलको अर्थ ९ गुणा ९ को संयोजन हो ।
राजोपाध्याय, कर्मचार्य, जोशी, राजभण्डारी, कपाली, वैद्य, डंगोल, खड्गी र देउला जाति मिलेर यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यी जातिले यहाँ जन्मदेखि मरणसम्मका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् देवपाटनमा । यो ग्रहको संयोजन अहिले बिग्रको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँको बस्ती उठाइदिएपछि ९ टोल अब रहेन । ९ टोलमध्ये ५ टोली उठाइयो । अब चार टोल मात्रै बाँकी छ । नवाली टोल, इतापाखा टोल, पाँचु टोल, भकुन टोल, करे टोल, लगानलाछी टोल, मतमडिल टोल, दथुटोलजस्ता टोल मिलेर बसेका थिए ।
यी टोलैपिच्छै बेग्लाबेग्लै जातको बसोबास थियो । राजोपाध्य, भण्डारी, वैद्य, शाक्य, श्रेष्ठ, डंगोल, मानन्धर, कसाई, नापित, संघ, गाइने, कुसुले, पोडेलगायतका जाति पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यहाँ नेवार जातिको चारै वर्णको बसोबास थियो । यी टोलमा अलगअलग जातिको बसोबास थियो । राजोपाध्य र वैद्यको थलो दथु टोल हो । शाक्यहरू नवाली टोलमा बस्छन् । डंगोलको बसोबास लगनलाछी टोलमा र भगु टोल हो । भण्डारीको टोल दथु टोल पाँचु टोल र मतण्डी टोल हो ।
प्रकाशित : असार ४, २०७६ १३:५९